Spotify na-eweghachi wijetị site na iji nyocha na ndị ọzọ | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, gụgharia
Bọchị ndị a gara aga, anyị na-echegbu onwe anyị maka mfu nke Spotify wijetị na gam akporo; ọma, ọ bụ naanị dị na a OS maka mobile ngwaọrụ. Taa ọ laghachiri na n'ụdị ikpeazụ.
Mgbe izu nke nsogbu obodoMa ọ dịkarịa ala na-egosipụta mwute maka enweghị nnukwu ngwá ọrụ iji kpọọ isiokwu kachasị amasị anyị na desktọọpụ, Spotify emezigharị ma mgbe ụbọchị ole na ole gachara na beta, wepụtara ya na nsụgharị ikpeazụ.
Na ihe a niile n'ụzọ kachasị mma, ebe ọ bụ na e megharịrị ya, ọ kawanye mma na arụmọrụ yana ọbụlagodi ugbu a enwere ike ịgbanwe nha ya ka ọ dabara na desktọọpụ nke ekwentị anyị. Bịanụ, ha arụpụtala ya.
Ya agobọchị gara aga anyị nyere gị ngwọta nwa oge inwe wijetị na desktọọpụ. Anyị na-ekwu banyere ihe anyị na-eche ihu na ngwa nke dị ọcha nkasi obi. Ọ-enye gị ohere na-egwu music si gị na desktọọpụ na ị na-adịghị ọbụna nwere imeghe Spotify.
E nwere oge ole na ole anyị ji Spotify na ekwentị anyị na inwe imeghe ngwaAgbanyeghị na ọ naghị ewe iwe ọ bụla, ịnwe wijetị n'aka, ọ bụ nzuzu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na anyị kwụsịtụ ndepụta Spotify anyị kachasị amasị, ma mgbe obere oge gachara, anyị chọrọ itinye ya, anyị ga-akụ egwu maka ya ịmalite ịkpọ egwu.
Anyị nwere ike ọbụna imeghari wijetị na isiokwu anyị nwere na desktọọpụ ma debe ya n’ebe ahụ pụrụiche nke ngwa ngwa ọdịnaya ọtụtụ multimedia ma ọ bụ ọbụna wijetị ndị ọzọ gbara ya gburugburu. Bịanụ, anyị na-ekwu maka ịhazi ọfụma nke mere gam akporo ama ama.
Spotify ewerekwala oge ya iji maa ọkwa na forum nke ya ọrụ obodo na ị ga-imelite gam akporo version ka ndị ọhụrụ iji nwee wijetị dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » The Spotify wijetị bụ azụ na ikpeazụ version